トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Pachinko emakhazeni ukutshala imali imishini nokumosha kunzima ukunciphisa ukuze ikhasimende
isihloko, kodwa kukhona utshalomali dolobha kwelinye lalawo akhawunti for a isisindo esikhulu izindleko Pachinkoya. Njengoba siphuma kungenzeka ukuthi asikwazi kwehliswa wenkokhelo ukuze ikhasimende futhi lapha kakhulu ukusebenzisa imali, kodwa thina kufanele uhlole njengoba omunye izinkomba.
muva nje, siba ezandayo stylish kakhulu pachinko eshintsha. Ukubukeka Yebo, kuze kube yingxenye esihle ngemihlobiso yangasese engaphakathi, ngaphansi pachinko eshintsha ukuthi ukuchitha imali. Kukhona futhi izitolo nazo wanamathela esinye isakhiwo. Ngokwesibonelo, umsebenzi iyunifomu, amaphosta, njll Kukhona izihlalo eziningi kungase kushintshwe phezulu naphansi ukuphakama. Ngokombono
pachinko emakhazeni uhlangothi, uma kukhona ngisho noma isevisi kumakhasimende kwenjongo, ezifana ezifana nokuqiniseka ukubukeka amakhasimende insikazi, ungase ube utshalomali dolobha ukuheha abathengi injongo. A yi-investimenti, uma kufika iyasebenza, ngoba ukuhunyushwa okuyilona elisebenzayo futhi kuze yokuthengisa, ukutshalwa kwezimali kungashiwo impumelelo enkulu.
Khona-ke, uma yokuthengisa bakhuphuke, ngoba ukuhunyushwa ngokwanele encishisiwe kungaba wenkokhelo ikhasimende, kuyoba yokuthi pachinko emakhazeni ekushiyeni ahlanzekile, kuyoba ngaphandle ukusho kokubili. Yibani ethile capital investment, pachinko eshintsha ukuthi ibhola laphaya iyasebenza uku Ngokwesilinganiso, akukho inkinga pachinko eshintsha, okuyinto kunganciphisa inzuzo.
Kodwa inkinga icala, ngenkathi izindleko hhayi kakhulu e capital investment, kuyinto yaba pa o ukuthi msebenzi futhi wandise yokuthengisa akavele. Endabeni enjalo yaba pachinko, lemali elihambisana investimenti dolobha, ziyoba yinto yokutakula owengeziwe kuyadingeka noma Kuyinto. Kusukela yokutakula izindleko iyinguqulo kanzima, esimweni esinjalo, asinasizathu ukuthi can Nante ukunciphisa kumakhasimende.
ubuye enhle, ezifana ukubonakala, pachinko eshintsha futhi uzizwe bokungafani ngokwedlulele inkokhelo, uma lo msebenzi we sasemakhazeni pachinko ukuthi akuwona uzinze, sicela ubheke ukhumbula ukuthi kukhona kungenzeka lokwehliswa kunzima. Ngaphezu kwalokho, isakhiwo futhi isigugile, ngisho ukuthi ezingcolile-esitolo umhlobiso kanye yangasese, kunezindlela eziningi uyisidala pachinko emakhazeni. Endabeni kuze emakhazeni pachinko kanye nalabo wayedinga isibindi kancane ukungena, uthambekela ekucabangeni pachinko emakhazeni we eside zaziwa ezimweni eziningi. Ngaphandle asesebenzisa
ukubukeka, njll, pachinko ukuthenga leya nto yokuzijabulisa e inkokhelo, kungase kwakungafanele sakugcina lokutshala izimali. Than ahlanzekile eshintsha pachinko, noma inkokhelo futhi ezinhle, ngicabanga ukuthi ezimweni eziningi ujike kahle. Pachinko izitolo ezifana ungachithi imali futhi phezulu ukutshalwa kwezimali, kungenzeka futhi some wenkokhelo ngaphandle izinzipho ukulungiswa.
Kafushane, kungakanani kukhona we wenkokhelo, kangakanani nail ukulungiswa muhle, futhi ukubheka ukusebenza kwe-simo, lezi ezintathu, ungakwazi ukuqagela ukunciphisa kungenzeka uma isimo sokuboshwa isikhathi esilingana utshalomali inhlokodolobha . Futhi enhle kangaka futhi nokungcola yokubukeka, hhayi kokushiya out yokuthi ngakho abukho ubudlelwano.
ufuna capital investment ukubona iningi ingxenye ukuthi yini noma cha ukulungisa labo eziphukile. Njll ukuthi sinqamukile yangasese sinqamukile Toka air conditioning, kungabonakali bayakwazi ukulungisa ingxenye obonakalayo of yakho, akukho isizathu ukuthi can Nante ukunciphisa. Njengoba izinsalela eziphukile lendawo ngokuvamile sasemakhazeni pachinko, ngicabanga ukuthi akukho yokubhadala.
Ngicabanga ukuthi uma kungenzeka kulezi izindaba Yebo inkomba, kodwa enokwethenjelwa kakhulu kungase kube into bheka idatha elibanzi ngaphandle kokuba yileyo ezifana esitolo umhlobiso. Lesi sakhiwo zincwadi zazizindala, ebizwa nangokuthi ezingcolile-esitolo umhlobiso kanye yangasese futhi, kuningi uyisidala pachinko emakhazeni. Endabeni kuze emakhazeni pachinko kanye nalabo wayedinga isibindi kancane ukungena, uthambekela ekucabangeni pachinko emakhazeni we eside zaziwa ezimweni eziningi. Ngaphandle asesebenzisa
Ngicabanga ukuthi uma kungenzeka kulezi izindaba Yebo inkomba, kodwa enokwethenjelwa kakhulu kungase kube into bheka idatha elibanzi ngaphandle kokuba yileyo ezifana esitolo umhlobiso. Re nail eyodwa kuphela ukulungiswa muhle, futhi ukubheka ukusebenza kwe-simo, ezintathu lokhu, ungakwazi ukuqagela ngokuthi ukuncipha uma isimo sokuboshwa isikhathi esilingana utshalomali dolobha senziwa. Futhi enhle kangaka futhi nokungcola yokubukeka, hhayi kokushiya out yokuthi ngakho abukho ubudlelwano.
Ngicabanga ukuthi uma kungenzeka kulezi izindaba Yebo inkomba, kodwa enokwethenjelwa kakhulu kungase kube into bheka idatha elibanzi ngaphandle kokuba yileyo ezifana esitolo umhlobiso.